Maki: amazon echo | Martech Zone
Maki: amazon echo
Iko Kutsvaga kwezwi pane iyo Cusp Yekushandura Commerce?
Chitatu, Ndira 24, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Iyo Amazon Show inogona kunge iri yakanakisa kutenga yandakaita mumwedzi gumi nembiri yapfuura. Ndakatenga imwe kunaAmai vangu, vanogara kure uye vanowanzo kuve nenyaya nekubatana kwenhare. Iye zvino, anogona kungoudza Show kuti andidane uye tiri kuita vhidhiyo kufona mukati memasekondi. Amai vangu vaiida zvakanyanya zvekuti vakatengera imwe vazukuru vavo kuti vagone kugara vachikurukura navo. Ini ndinokwanisawo
Imwe yemasiraidhi andinokurukura mune ingangoita hurukuro dzese dzandinadzo nemabhizimusi ndidzo dzandinoti ngano yekupa. Mune chero hurongwa hwekuyera, tinosarudza boolean uye discrete mitemo yekuzvibata. Kana izvi, zvino izvo. Icho chinetso, zvakadaro, nekuti haisiriyo nzira yekutenga kunoitwa. Izvo hazvina basa kana iwe uri mutengi kana iwe uri bhizinesi - hachisi chokwadi cheicho chevatengi rwendo.